Iinkolelo ze-Unitarian Universalist, i-Practices, Imvelaphi
Hlola iiNkolelo, iZenzo, kunye neMvelaphi yeCawa ye-Unitarian Universalist
Umbutho we-Unitarian Universalists Association (UUA) ukhuthaza amalungu ayo ukuba afune inyaniso ngendlela yawo, ngokweziqu zabo.
I-University Universalism ichaza njengenye yeenkolo zonqulo kakhulu, ivumelane nabakholelwa kuThixo, i-agnostics, amaBuddha, amaKristu kunye namalungu onke amanye amakholwa. Nangona iinkolelo ze-Unitarian Universalist ziboleka kwiintsholongwane ezininzi, inkolo ayikho inkolo kwaye igweme iimfuno zemfundiso .
Iinkolelo ze-Unitarian Universalist
IBhayibhile - Ukukholelwa kwiBhayibhile akudingeki. "IBhayibhile iyimqoqo yolwazi olucacileyo oluvela kumadoda abhalileyo kodwa lubonakalisa ukunyaniseka kunye neengcamango zenkcubeko kwixesha apho libhalwa kwaye lihlelwe khona."
Ukutya - Ibandla ngalinye le-UUA ligqiba ukuba liya kubonisa njani ukwabelana noluntu kunye nokutya. Abanye bakwenza njengekhofu engafanelekanga emva kweenkonzo, ngelixa abanye basebenzisa umkhosi osesikweni ukuba baqonde iminikelo kaYesu Kristu .
Ukulingana - Inkolo ayikucalucaluli ngenxa yobuhlanga, umbala, isini, ukhetho lwezesondo, okanye umvelaphi wesizwe.
UThixo - Ezinye iiNationalarian universalists zikholelwa kuThixo ; abanye a ba Ukukholelwa kuThixo kukukhethayo kule ntlangano.
Izulu, isihogo - i-Unitarian Universalism ibona izulu nesihogo ukuba ibe yimiqondo yengqondo, eyenziwe ngabantu kunye nokubonakalisa ngezenzo zabo.
UYesu Kristu - uYesu Kristu wayengumntu obalaseleyo, kodwa uyingcwele kuphela kwinto yokuba bonke abantu banayo "intlapha kaThixo," ngokutsho kweUUA.
Unqulo luphika imfundiso yobuKristu yokuba uThixo ufuna idini lokucamagushela isono .
Umthandazo - Amanye amalungu athandaza xa abanye bacamngca. Inkolo ibona umkhwa ngokomoya nangengqondo.
Isono - ngelixa i-UUA iqonda ukuba abantu bayakwazi ukuziphatha kakubi kwaye abantu banembopheleleko yezenzo zabo, bayayenqaba inkolelo yokuba uKristu wafa ukukhulula uhlanga lwesintu esonweni.
Practical Universalist Practices
Iingxowa - iinkolelo ze-Unitarian Universalist zithetha ukuba ubomi ngokwawo yintlamenti, ukuba iphile ngobulungisa nangemfesane. Nangona kunjalo, inkolo iyavuma ukuba ukuzinikezela abantwana , ukugubha ukuza kwe minyaka, ukujoyina umtshato, nokukhunjulwa kwabafileyo kubakho imicimbi ebalulekileyo kwaye inika iinkonzo kwezo zihlandlo.
UUA Inkonzo - Egcinwe ngeCawa kusasa nakwiihlandlo ezahlukahlukeneyo ngeveki, iinkonzo ziqala ngokukhanyisa i-chalice evuthayo, i-Unitarian Universalism isimboli sokholo. Ezinye iindawo zenkonzo ziquka umculo onomculo okanye onomculo, umthandazo okanye ukucamngca, kunye nentshumayelo. Intshumayelo inokuthi ibe malunga neenkolelo ze-Unitarian Universalist, imiba yezempikiswano, okanye ezopolitiko.
I-Unitarian Universalist Church Background
I-UUA yayineziqalo zayo eYurophu ngowe-1569, xa iTransylvanian uKohn John Sigismund ikhuphe umyalelo onokwenza inkululeko yenkolo. Abasunguli abaphakamileyo baye baquka uMichael Servetus, uJoseph Priestley , uJohn Murray noHoseball Ballou.
I-Univesithi ehlelwe e-United States ngo-1793, kunye nama-Unitarians emva kwe-1825. Ukuhlanganiswa kweCawa yase-Universalist yaseMelika kunye ne-American Unitarian Association yakha i-UUA ngo-1961.
I-UUA iquka amabandla angaphezu kwama-1,040 emhlabeni jikelele, akhonze ngabafundisi abangaphezu kwe-1,700 abanamalungu angaphezulu kwama-221,000 e-United States nakwamanye amazwe. Ezinye ii-Unitarian Universalist kwimibutho yaseKhanada, iYurophu, amaqela ngamazwe, kunye nabantu abazichazela ngokwasemthethweni njenge-Unitarian Universalists, bazisa i-800,000. EkwaseBoston, eMassachusetts, iCandelo le-Unitarian Universalist lizibiza ngokuba yinkolo ekhulayo ngokukhawuleza eNorth America.
Iicawa ze-Unitarian Universalist nazo ziyafumaneka eKhanada, eRomania, eHungary, ePoland, kwiCzech Republic, eUnited Kingdom, ePhilippines, eIndiya nakwamanye amazwe eAfrika.
Amalungu ebandla ngaphakathi kweUUA azilawula ngokwazimeleyo. UUA omkhulu ulawulwa yiBhodi yeTrasti ekhethiweyo, ilawulwa nguModareli otyunjweyo.
Imisebenzi yolawulo eyenziwa ngumongameli okhethiweyo, abathathu abaphathi bee-ofisi kunye nabahlanu abalawuli beSebe. KwiNyakatho yeMerika, i-UUA ihlelwe kwii-19 zezithili, zenziwa yiNtloko yeSithili.
Kule minyaka, i-Unitarian Universalists ifake i-Unitarian Universityal iquka u-John Adams, u-Thomas Jefferson, uNathanel Hawthorne, uCharles Dickens, uHerman Melville, uFlorence Nightingale, i-PT Barnum, u-Alexander Graham Bell, uFrank Lloyd Wright, uChristopher Reeve, uRay Bradbury, uRol Serling, u-Pete Seeger, Andre Braugher, noKeith Olbermann.
(Imithombo: uua.org, famousuus.com, Adherents.com, kunye neenkolo eMelika , ehleliwe nguLeo Rosten.)
Indlela Yokuthembela Kakhulu KuThixo